Obolewwan keenyaa Kofallerra Mana hidha Shaashamannatti Argaman giduun isaan 19 guyaa hardhaa hiikaman . -
Obolewwan keenyaa Kofallerra Mana hidha Shaashamannatti Argaman giduun isaan 19 guyaa hardhaa hiikaman .
ODUU GAMACHIISA !!!
Sambata Fuulbana 1 / 2008
Musliimootni Kofalee irraa Hiidhaman gidduu nammooni 19 lakkifamuf ta’u ibsame.
Motummaan Musliimoota Kofalee irrat ajechaa fi Miidhaa hammaan hin jedhamne eggaa rawaate booda Musliimoota qulquluu hiidhuun hiraarsun issaa ni yadatama.
Musliimmooni hiidhaman kun kan adabii motummaan irrat dabarse kan dharaa xumuratuuf yeroon murasni hafeef yoo ta’u nammoota 19 motummaan dhifaama tasiisera jechuun lakkiisuuf ta’u dhaga’amera.
1, Ramadaan Awwal
2, Jamaal Dulle
3, A/rahamaan Shuna
4, Aabbu Gishee
5, Hasan Huseen
6 ,Abdoo Bushuraa
7 ,Huseen Birki
8, Huseen Gammada
9 ,Qaabato Qadhaaso
10 ,Ahimad Galataa
11 ,Musxafaa Dulle
12, Sh/mahmud Badhaaso
13, Musamma Huseen
14, Hasan Tashite
15, Sulxaan Qunbii
16, Yaareed Guyye
17, A/qaadir Betekka
18, Sh/jamaal Dhaqqabo
19 ,Aabbuu Gammada
Obolewwan keenya kun yeroo ammat mana hidhaa keeysa bahuudhan Magaala Shaashamane iddo tokkot wolit qabamuudhan Obolewwan keenyan laaqana afeerama kan jiran tahu madden keenya nuf gabaasaniiru .
Obolewwan keenya hiikamani fi maati isaan akkasummas hawaasa muslimaa hundaan baga gamaddan jenna.
Yaa Rabbi gammachu keenya wolit nu Aansii !!!
Previous KANAA BEKTUU LATAA. LAKKOFSAA CALENDARA OROMOO LAKAWATUU KAN HABASHATIIN ADDA TA’UU INNIS KANA FAKATAA WALII SHARII GODHA
Next Minneapolis Oromos celebrating the Oromo street